Militariga Burma waxay gaysteen xasuuq ka dhan ah Rohingya
Mid ka mid ah mas’uuliyadaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda ayaa waxaa ka mid ah, inuu go’aamiyo isaga oo wakiil ka ah Dowladda Mareykanka, in xad-gudubyo ka dhan ah aadanaha dhaceen iyo in kale.
21-kii Maarso, Xoghaye Antony Blinken ayaa adeegsaday mas;uuliyaddaas, isaga oo iclaamiyay in xubno ka tirsan millatariga Burma ay geysteen xasuuq iyo danbiyo ka dhan ah bani’aadannimada, kuwaas oo ay kula kaceen Muslimiinta laga tirada badanyahay ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya.
“Waa go’aan aan gaaray oo ku salaysan dib-u-eegis lagu sameeyay qiimayn dhab ah iyo falanqayn sharci oo ay diyaarisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, kaas oo ay ku jireen dukumentiyo faahfaahsan oo ay soo diyaariyeen ilo kala duwan oo madax-bannaan, dhexdhexaad ah, oo ay ku jiraan ururada xuquuqul insaanka sida Amnesty International iyo Human Rights Watch, iyo sidoo kale xaqiiqo-raadin innaga noo gaar ah oo adag,” ayuu yiri Xoghayuhu.
Mid ka mid ah ilahaasi waxaa, warbixin ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka soo diyaarisay sannadki 2018.
“Warbixintu waxay ku saleysantahay sahan iyo wareysiyo laga soo qaaday in ka badan 1,000 qof oo ka mid ahaa qaxootiga Rohingya ee ku nool dalka Bangladesh, kuwaas oo dhammaan ay soo bara-bixiyeen qalalaasihi sannadihi 2016 ama 2017.
Saddex meelood meel, dadkaasi la wareystay ayaa sheegay in ay shakhsiyan goob-joog u ahaayeen xubno ka tirsan millatariga oo dilaya qof rayid ah. In ka badan kala bar ayaa marqaati ka noqday oo arkay ficillo kufsi ah. Mid ka mid ah shanti qof ayaa arkay dhacdooyin naxdin leh oo ay ka mid yihiin dil ama dhaawac, ama tacaddi hal mar loo geystay in ka badan 100 ruux.”
“Caddeynta ayaa sidoo kale tilmaameysa ujeeddo cad oo ka danbeysa xasuuqaani weyn, ujeedaddaasi oo ah burburinta Rohingya,” ayuu yiri xoghaye Blinken.
"Ujeeddada waxay ku caddahay faallooyinka dadweynaha ee Min Aung Hlaing, oo ah taliyaha guud ee millatariga Burma, kaas oo kor kala socday howlgalka. 1-di bishi September, 2017, xilli ay ciidamadu burburinayeen xaafadaha, dilayeen, jir-dilayeen oo ay kufsanayeen ragga, dumarka iyo carruurta, ayaa waxa uu yiri hadalkaan, waxaana soo qaadanayaa sida uu u dhahay: ‘Dhibaatada dadka Bangaaliyiinta ayaa aheyd mid soo jireen ah oo noqotay shaqo aanan la dhameystirin… Dowladda hadda xafiiska joogto ayaa xil weyn iska saartay oo hadda xalkeeda heyso.’
“Boqolleey, tirooyin, qaabab, ujeeddo: ayaa aad muhiim ugu ah si go’aan looga gaaro xasuuq,” ayuu yiri Xoghaye Blinken oo intaasi sii raaciya"Dabcan, dariiqa looga baxo xasuuqa wuxuu sidoo kale ku socdaa cadaalad ... Hay'adaha maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ... waxay sanado badan ku qaadatay inay diiwaangeliyaan xadgudubyada ka dhanka ah Rohingya iyo kooxaha kale ee qowmiyadaha iyo diimaha ee Burma." Galalka kiisaska way sii kordhayaan, ayuu yidhi xoghayuhu.
Wuxuu intaasi sii raacsaday in "maalin ay imaan doonto, maalintaas oo kuwa masuulka ka ah ficilladaasi gurracan ay ka jawaabi doonaan waxa ay sameeyeen."
“Iyadoo la tixraacayo go’aamintaan, ayay Dowladda Mareykanka mar kale xaqiijineysaa ballan-qaadkeeda weyn ee ah in ay dadka Rohingya rafiiq kula tahay dariiqan looga baxayo xasuuqa – loona jiheystay runta, isla xisaabtanka iyo guri si siman u soo dhaweynayo, kaas oo xushmeyn doono xaquuqdooda aadanaha iyo sharaftooda, si la mid ah sida dhammaan dadka Burma.”